Lenovo Nanambara Yoga Tab 3 Plus sy Yoga Book | Androidsis
Ny orinasa malaza Lenovo dia nanambara ny taranaka vaovao misy ny roa amin'ireo vokatra be mpahalala indrindra. Ireo dia ny takelaka Yoga Tab Plus 3 sy ny hybrid Yoga-tablet tablet-laptop.
Ny Yoga Tab Plus 3 dia manan-danja indrindra amin'ny efijery misy fanapahana 2K, mpandahateny JBL ary fahaleovan-tena 18 ora. Ho an'ny ampahany, ny Lenovo Yoga Book vaovao dia hybrid eo anelanelan'ny takelaka sy ny solosaina finday izay manolotra endrika ultra-manify sy fitendry tsy manam-paharoa.
1.1 Famaritana, vidiny ary misy
2 Lenovo Yoga Book, ao amin'ny 2 amin'ny 1 vaovao
2.1 Fomba fiasa lehibe
2.2 Jiro tsy manam-paharoa
Manomboka amin'ny fitaovana izay mety mahazatra ny olona rehetra izahay, ny Lenovo Yoga Tab 3 Plus. Natolotra tao anatin'ny sehatry ny IFA 2016 any Berlin, takelaka iray io, mifantoka indrindra amin'ny fialamboly sy ny fihinanana atiny multimedia. Noho io antony io, ny sary sy ny feo dia roa amin'ireo tombony lehibe. Manolotra zavatra tsara izany Efijery 10,1 mirefy misy kalitao 2K, JBL sonia natsangana ary mpandefitra isan-karazany.
Ny fanampim-baovao farany amin'ny andiany Yoga Tab 3 dia mitondra traikefa fialamboly sinema amin'ny mpampiasa tablette Yoga amin'ny isa rehetra. Miaraka amin'ireo mpampiasa marobe mijery seho marathon amin'ireo fandaharana amin'ny fahitalavitra ankafiziny sy sarimihetsika amin'ny takelaka alehany, dia miharihary ny filàna fitaovana iray manome traikefa an-tsary sy sary avo lenta, miaraka amin'ny fahafaha-misafidy feno ho an'ny tontolo samihafa sy batterie lava lava.
Famaritana, vidiny ary misy
Ity takelaka ity dia manana ny Technicolor Color Enhance teknolojia afaka mampifanaraka ny efijery amin'ny atiny multimédia namboarina teo amboniny ary manolotra traikefa tsara indrindra azo atao.
Ny batterie 9300 mAh, miaraka amina maody haingam-pandeha haingana amin'ny alàlan'ny Mpampitohy USB-C, manome anao a mizaka tena hatramin'ny 18 ora. Ary izany rehetra izany dia vita amin'ny mpandahateny marika JBL miisa efatra avo lenta.
Toy ny maodely "Yoga" hafa, ny Yoga Plus 3 dia mampiditra fijoroana mamela ny fomba fampisehoana samy hafa.
Mikasika ny vidiny sy ny fahafahany, nanambara ny orinasa fa ho hita amin'ny volana oktobra ho avy izao amin'ny vidiny $ 299.
Lenovo Yoga Book, ao amin'ny 2 amin'ny 1 vaovao
Ary noho izany dia tonga amin'ilay vokatra mety mahaliana kokoa izahay, ny Lenovo Yoga Book. Amin'ity tranga ity dia eo alohan'ny 2 amin'ny 1 isika, hybrid eo anelanelan'ny takelaka sy solosaina finday. Fitaovana misy efijery 10.1-inch izay mifantoka amin'ny fiasa amin'ny hetsika fa ny fampifangaroana ireo fiasa ilaina amin'ny fialamboly.
Ny Yoga Book dia manana 10,1 santimetatra IPS efijery voalohany eo akaikin'ny a fampisehoana faharoa nitaingina bisikileta izay miasa ho toy ny klaviezy sy touchpad ho an'ny stylus tafiditra ao izany. Ity fifangaroana ity dia mahatonga azy io ho vokatra tsara ho an'ny mpanakanto sy ny famoronana izay mila mamolavola rehefa mandeha. ny kitendry dia mora tohina ary misy hevitra momba ny haptic hanampy amin'ny fampihenana ny lesoka amin'ny fanoratana ary hahatonga ilay zavatra niainana hahatsapa ho toy ny tena fitendry.
Lenovo Yoga Book dia afindra ao anaty a Processor an'ny Intel Atom x5 sy RAM 4 GB. Ny rafitra fiasa izay iasan'izy ireo dia Android Marshmallow, na izany aza dia namboarina tamin'ny interface manokana azy, Book UI. Misaotra an'io, azo atao ny manararaotra tsara kokoa ny fitaovan'ny Yoga Book. Ireo mpampiasa dia afaka mihazakazaka fampiharana amin'ny fikandrana maro. Ataovy fatratra ihany koa na haheno ary ampiasao ny hitsin-dàlan'ny fitendry Windows miaraka amin'ny Halo Keyboard.
Ny Lenovo Yoga Book dia atolotra miaraka Fitahirizana 64 GB mpandahateny Dolby Atmos anaty sy mihamafy. Lenovo dia nilaza fa ny 2 ao anatin'ny 1 dia afaka mahatratra 15 ora ny fampiasana amin'ny vola tokana.
Jiro tsy manam-paharoa
Raha ny lanjany sy ny refy dia vokatra izy io hazavana fanampiny Satria 9,6 mm fotsiny ny hateviny rehefa mikatona ary milanja dia mety hahatratra 15 ora ny fampiasana azy amin'ny fiampangana, na dia 9,6 mm aza ny hateviny rehefa mikatona. Ary ny lanjany dia latsaky ny 700 grama, izay mahatonga azy io ho fitaovana tena azo entina.
Farany, misy ny 'pen-tena', penina Wacom azo ampiasaina raha tsy misy bateria. Ny habeny sy ny tsapany dia manakaiky ny tena penina ho an'ny fiainana an-tsoratra mahafinaritra kokoa.
Lenovo Yoga Book dia ho hita amin'ny volana oktobra amin'ny volamena sy ny fitaovam-piadiana amin'ny $ 499. Hisy ihany koa maodely tsy misy Windows amin'ny Carbon Black amin'ny $ 549.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Lenovo dia nanambara ny Yoga Tab 3 Plus sy ny Yoga Book
Pablo Cancian dia hoy izy:
Salama, manana boky yoga miaraka amin'ny android 7 nohavaozina aho, tsy mamela ahy hametraka mpanampy amin'ny teny espaniola izany, manana koa aho Lenovo proab 2 pro miaraka amin'ny android 6, tonga lafatra, satria tsy azo atao, efa nanandrana nanadio aho Google app cache ary serivisy google dia manova ny teny anglisy aorian'ny Espaniôla dia mitohy ny zavatra rehetra,
Misy ve ny vahaolana hametrahana azy amin'ny teny espaniola na ny farany amin'ny teny anglisy amin'ny takelaka lenovo
Valiny tamin'i Pablo Cancian
Pablo Canciani dia hoy izy:
Valiny tamin'i Pablo Canciani